Ungazi kanjani ukuthi umdlalo usebenza ku-PC yami, i-Emulator.online ▷ 🥇
Ngazi kanjani ukuthi umdlalo usebenza ku-PC yami? Ungathola kalula ngosizo lwamathuluzi akhethekile njengewebhusayithi Ngingayiqhuba?. Uma ungafuni ikhompyutha yakho iskenwe, ungaya endleleni yendabuko yokuqhathanisa ukucaciswa ngesandla.
Bona ngezansi ukuthi ungabona kanjani ukuthi i-PC yakho ibuthakathaka noma izosebenza kahle ukuqhuba umdlalo.
Ngosizo lwewebhusayithi ekhethekile
Kukhona amanye amawebhusayithi agxile ekuqhathaniseni imininingwane yekhompyutha yakho nezidingo eziphansi ezifunwa yimidlalo eyinhloko emakethe. NOMA Ngingayiqhuba? kungenye yezintandokazi kakhulu, ukwazi ukuqinisekisa ukumiswa komshini wakho ngokuzenzakalela.
1. Vula isiphequluli osithandayo bese uya ku-Can I run it?
2. Ekhasini eliyinhloko, uzobona ibhokisi lokusesha lapho kufanele uthayiphe khona igama lomdlalo, njenge Ama-Sims 4. Uma umdlalo utholakala kukhathalogi yekhasi, uzovela ohlwini. Chofoza igama elibonakala livikela iphutha lokusesha;
3. Bese uchofoza inkinobho Ungayisebenzisa ukwenza ucwaningo;
4. Ekhasini elilandelayo, kuzokhonjiswa izidingo ezisezingeni eliphansi nezilungele ukudlala umdlalo. Ukuze i-PC yakho ihlaziywe, kuyadingeka ukulanda ifayela elivumela iwebhusayithi ukuthi iqinisekise ukucaciswa kobuchwepheshe bomshini wakho. Ukuze wenze lokhu, chofoza inkinobho Ungayisebenzisa ukulanda uhlelo lokusebenza kuwebhusayithi;
5. Vula ifayela elisebenzisekayo bese ugcina ikhasi lewebhusayithi livulekile. Uhlelo luzoqala ngokuzenzekelayo ukuhlaziya umshini wakho;
Ngokuya ngesiphequluli, uhlelo luzoboniswa ezansi kwesikrini lapho ukulanda sekuqedile. Izotholakala futhi ohlwini lokulanda lwe isiphequluli futhi nakanjani kufolda lapho uya khona.
6. Isikhathi sokuxilonga singahluka kusuka kumasekhondi ambalwa kuya kumizuzu futhi umphumela uzoboniswa ekhasini lewebhusayithi oligcine livulekile. Iyakutshela uma umshini wakho unezidingo ezisezingeni eliphansi futhi nezinconyiwe ukuze umdlalo usebenze ngaphandle kwezinkinga.
Amanye amasayithi ukuthola ukuthi umdlalo ugijima kwi-PC
I-PCGameBenchmark ikuvumela ukuthi ufake ngesandla izilungiselelo ze-PC yakho noma ulande isoftware ehlaziya ngokuzenzakalela ukucaciswa komshini. Ngemuva kwalokho vele ufune igama lomdlalo.
Yize ubhekene neziqu ze-EA, i-Game Debate inezinketho ezivela kwabanye onjiniyela. Njengethuluzi langaphambilini, likuvumela ukuthi ufake idatha ngesandla noma ulande uhlelo lokusebenza oluqoqa imininingwane nge-PC ngokushesha. Ngakho-ke, vele ufune umdlalo oyifunayo.
Enye indlela yokwazi ukuthi umdlalo uzosebenza noma cha kwi-PC yakho ukuqhathanisa ngesandla imininingwane yezobuchwepheshe ye-PC nezidingo ezisezingeni eliphansi ezidingwa ngumdlalo. Isixazululo singathatha isikhathi eside ukudlula amawebhusayithi, kepha futhi kulula ukwenza.
Ungayithola kanjani imininingwane ye-PC
Ungathola imininingwane yezobuchwepheshe yekhompyutha yakho ngezindlela eziningana. Into elula kunazo zonke ukubhala igama Msinfo32.exe ebhokisini lokusesha le-Windows. Ngokuya ngohlobo lohlelo, ithuluzi lokusesha liyatholakala kubha yamathuluzi noma kwimenyu yokuqala (ngokuchofoza kusithonjana seWindows).
Kumiphumela yosesho, chofoza Msinfo32.exe ukuvula. Uma ungakwazi, kungadingeka Qalisa njengomlawuli. Ukubona inketho, chofoza kwesokudla nje kumphumela.
Ewindini Imininingwane Yesistimu, kubha yohlangothi lwesobunxele, chofoza Isifinyezo sesistimu. Ungahlola imininingwane mayelana isistimu yokusebenza (1), iprosesa (2) mi inkumbulo (3).
Ukuhlola isitoreji, chofoza Isitoreji bese kungena Izinyathelo.
Noma kunjalo, ukuthola imodeli yekhadi lakho levidiyo, chofoza Izingxenye bese kungena Ukuvezwa. Uma ikhompyutha yakho inekhadi elizinikele kanye nekhadi elakhelwe ngaphakathi, imininingwane kuzo zombili izinhlobo izokhonjiswa.
Umqondisi wethu Buka izilungiselelo ze-PC ichaza ukuthi ungahlola kanjani imininingwane ngokuningiliziwe kuzinguqulo ezahlukahlukene zeWindows. Buza ukuthi ufuna ukwazi imininingwane eyengeziwe ngale ndaba.
Uma ufuna ukusheshisa inqubo, ungasebenzisa uhlelo IsicacisonguCCleaner. Uhlobo lwamahhala lungaqinisekisa i-hardware futhi lunikeze imininingwane edingekayo ukubona ukuthi umdlalo uyahambisana yini nomshini wakho.
Vele ulande, ufake bese uqhafaza inkinobho Qalisa Ukukhuluma. Ngemizuzwana, idatha emayelana nedivayisi iyakhonjiswa, njengoba kukhonjisiwe ngezansi. Ngaphezu kwalokho, kubikwa nokushisa kwe-CPU nekhadi levidiyo.
Ukuqhathanisa nezidingo ezisezingeni eliphansi lomdlalo
Lapho usunezincazelo zobuchwepheshe zekhompyutha yakho esandleni, mane uhlole izidingo eziphansi ezidingekayo ukuze umdlalo usebenze emshinini. Lolu lwazi luvame ukutholakala kumawebhusayithi wonjiniyela nakuzingxenyekazi ezibagcinayo.
Ku-Steam, isibonelo, imininingwane ingatholakala ngaphansi kwesigaba Mayelana nalo mdlalo. e Izidingo zesistimu, yizidingo eziphansi nezinconyiwe zokusebenzisa umdlalo ku-PC.
Endabeni yeFifa 21, kukhonjiswa imiphumela elandelayo:
Enye indlela ukusebenzisa amasayithi ahlangabezana nezimfuneko eziphansi zemidlalo esemqoka endaweni eyodwa. Vele useshe ngamagama ukuthola okufunayo.
Ngingayiqhuba, i-PCGameBenchmark ne-Game Debate zinikele ngale datha. Ngaphandle kwabo, kukhona nekhasi lezidingo ze-Game System.
Izidingo ezincane x Izidingo ezinconyiwe
Izidingo ezisezingeni eliphansi zikhombisa i-Hardware ekwazi ukuqhuba umdlalo. Kodwa-ke, izosebenza kangcono, njengehluzo ezibushelelezi nezingcono, uma i-PC inemininingwane enconyiwe.
Uhlelo lokusebenza nesikhala sediski esidingekayo akuhluki phakathi kwezidingo eziphansi nezinconyiwe. I-RAM, iprosesa kanye nekhadi lemidwebo yizinto ezingahluka kakhulu kuye komunye.
Ama-emulators we-Android ahamba phambili futhi alula kakhulu ongawadlala kuma-PC abuthaka
Izinketho zokurekhoda kwesikrini kwe-PC ebuthakathaka
Ungaxhuma kanjani ifoni yakho kwi-TV engahlakaniphile ngezindlela ezi-5 ezihlukile